Liiska Magacyada Weriyeyaashii ku dhintey iyo kuwii ku dhaawacmay Qarax ka dhacay Muqdisho (Akhri Magacyada). Soomaalinews.com 20 Sep 12, 18:11
Faah faahin dheeraad ah ayaa kasoo baxeysa qasaaraha ka dhashay qaraxyo Maqribnimadii caawa lala eegtay maqaayadda Village oo ku taala magaalada Muqdisho. HOOS KA AKHRI LIISKA WERIYE YAASHA KU DHINTEY IYO KUWA DHAAWACMAY.
WERIYE YAASHA LASOO SHEEGAYO IN AY GEERIYOODAY:
1.	C/raxmaan Yaasiin � Agaasimihii idaacadda VOD ee magaalada Muqdisho.
2.	C/sataar Daahir Sabriye- Wariye ka tirsanaa Telefishanka Qaranka �SNTV�.
3.	Liibaan Cali Nuur- Wariye ka tirsanaa idaacadda Raadiyo Muqdisho.
1.	Maxamed Xuseen Gentelman oo ka tirsanaa Telefishinka iyo Raadiyaha Qaranka.
2.	C/laahi Suldaan � oo ka tirsanaa idaacadda Kulmiye.
3.	Shiine oo isaguna ka tirsanaa Radio Kulmiye.
4.	Maxamed Biibaaye- oo ka tirsanaa idaacadda Raadiyo Muqdisho.
5.	C/kariin Guutaalle oo aanan hubin radiyaha ama TV-ga uu u shaqeynayey.
Waxaa jira dad fara badan oo rayid ah oo aan la hubin tiradooda rasmiga ah oo kunafwaayey qaraxyada inkastoo wararka hordhaca ah ay xaqiijinayaan 14 qof oo dhimasha ah. Waqtiga oo habeen ah dartiis iyo wax tirakoob rasmi ah oo aan jirin ayaan loo heli karin tirada guud ee dadka waxyeeladu soo gaartay, balse waxaan isku dayi doonnaa, inaan markasta idiin soo gudbinno wixii ku soo kordha.
Innaa lilaahi waa inaa Ileyhi Raajicuun.